माधव नेपाललाई यस्तो पत्र पठाउँदै केपी ओलीले सोधे, तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने ? – नेपाली संगसार
माधव नेपाललाई यस्तो पत्र पठाउँदै केपी ओलीले सोधे, तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने ?
नेपाली संगसार calendar_today ७ बैशाख २०७८, 10:26 am
काठमाडाैं । नेकपा एमालेमा फेरी कारवाहीको शिलसिला सुरु भएको छ । नेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका २७ सांसदहरुलाई कारवाही प्रकृया सुरु गरेका छन् । उनले पहिलो चरणमा माधव नेपाल सहित २७ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । सोमवार बसेको एमालेको बैठकले माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायत २७ सांसदलाई सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो। ओलीले संसदीय दलको विधान २०६६ विपरीत सरकार विरुद्ध क्रियाकलाप गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
सोमबार नेपाल पक्षका सांसदलाई तीन पृष्ठको पत्र पठाउँदै ओलीले ४ बुँदे प्रश्न सोधेका छन्। ओलीले पठाएको स्पटीकरणमा थप गतिविधि जारी राखे जुनसकैबेला थप कारवाही गर्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।